कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा लिप्त - newslinesnepal
प्रकाशित मिति : ७ पुष २०७५, शनिबार १६:१७
‘मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास भएपछि मात्रै सामाजिक न्यायको ग्यारेन्टी हुन्छ । यतिवेला कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । तर, एकीकरण भएको भनेको पार्टीको संरचना अहिले पनि अन्योलमा छ । आफ्ना कार्यकर्तालाई तलसम्म प्रशिक्षण दिनुपर्दैन ? अहिले महिलामाथि भएका हिंसामा अपराधी पत्ता नलागेको विषय लाजमर्दो छ’
‘६ महिनाभित्रमा महाधिवेशनको मिति तय गर्न नसक्नु अनि नौ जनाको सचिवालयलाई केन्द्रीय समिति बनाउनु हुँदैनथ्यो । तर, यति ठूलो केन्द्रीय समिति बनाए । त्यो कमिटीको बैठक नै कहिल्यै पनि बसेको सुनिँदैन । पार्टीको बैठक पनि वेला र परिस्थितिअनुसार बस्न सक्दैन, नेताहरू आइएनजिओको सम्मेलनमा भने जान्छन्, यस्तो पनि कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ ? यसले कम्युनिस्ट पार्टी बदनाम हुँदै छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ’
मलाई ५० हजार दिनुपर्यो भनेर फोन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्यो । त्यो काम नेताबाट सुरु गर्नुपर्छ । नेताहरूले इमानदारीता पूर्वक काम गर्ने हो भने पाँच वर्षमा सबै समस्या समाधान हुन्छ । निर्वाचनमा हुने गरेको चन्दा र निजी खर्चको व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा खर्च गर्न नपाउने नियम संसद्मा ल्याउनुपर्छ । विकास र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राष्ट्रिय सहमति सबैले गर्नुपर्छ।